मेलम्चीमा फेरि बाढी,शनिबार बिहानै बगायो एक घर - Mountain Media
मेलम्चीमा फेरि बाढी,शनिबार बिहानै बगायो एक घर
मेलम्ची (सिन्धुपाल्चोक), असार १२ गते । ‘‘यो बर्खामा बालुवामुनि पुरिएको घर कसरी खोज्न सकिएला र ? सम्भव नदेखेर डेरा खोज्न थालेका हौँ,’’ मेलम्ची नगरपालिका–११ का स्थानीय ठाकुरप्रसाद रिजाल भन्नुहुन्छ । असार १ गतेको बाढीले आफ्नो तीनतले घर पुरेपछि विद्यालयमा बस्नुभएका रिजाल अहिले मेलम्चीमै सुरक्षित ठाउँमा कोठा खोज्न थाल्नुभएको छ ।
मेलम्ची र इन्द्रावती खोलामा आएको बाढीसँगै सीतलादेवी माध्यमिक विद्यालय, भुमेस्थान आधारभूत विद्यालय र लोकतन्त्र आधारभूत विद्यालयमा बस्नुभएका बाढीपीडित सधैँ विद्यालयमा बसेर निर्वाह नचल्ने भएपछि डेरा खोज्न थाल्नुभएको हो । आफ्नै गाउँमा बाढीपीडित भएर डेरा खोज्नु पर्ला भन्ने उहाँहरूले सपनामा पनि सोच्नुभएको थिएन । केही दिनअघिसम्म मासिक हजारौँ रुपियाँ डेराभाडा उठाउने घरबेटीको अहिले डेरा खोज्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।
त्यहाँको सबैभन्दा ठूलो विद्यालय शीतलादेवी माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक क्षेत्रप्रताप अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित समितिले बाढीबाट क्षति पुगेको घर र जग्गा अभिलेखीकरणको कार्य सुरु गरेको मेलम्ची नगरपालिका–१०, का अध्यक्ष भक्तबहादुर खड्काले जानकारी दिनुभयो । ‘‘अहिलेसम्म हाम्रो वडाका १९ वटा घर ‘कोल्याप्स’ भएका छन्, ती घरमा बस्ने ५० भन्दा बढी परिवारको स्कुलमा बास छ,’’ अध्यक्ष खड्का थप्नुहुन्छ, “एक महिना अघिसम्म हजारौँ रुपियाँ घरभाडा उठाउने घरबेटी अहिले डेराको खोजीमा भौँतारिरहनुभएको छ ।”
सुरक्षित ठाउँमा डेरा भेट्टाउनै मुस्किल परेको गणेशप्रसाद रिजालले बताउनुभयो । उहाँ व्यावसायिक रूपमा पशुपालन गरेर बस्नुभएकाले त्यसका लागि उपयुक्त ठाउँ र टहरो बनाउन सकिने ठाउँ खोजिरहनुभएको छ । उहाँको गोठबाट चारवटा भैँसी र पाठापाठीको उद्धार गरिए पनि भाँडाकुँडा सबै बाढीले बगाएको छ ।
मेलम्ची नगरपालिकाभित्रकै बहुमूल्य घरजग्गा बगाएपछि वडाका ३५ परिवार घरविहीन भएको वडा नं ६ का अध्यक्ष जितराज थापाले बताउनुभयो । दुई साताअघिसम्म अरूलाई डेरामा राख्ने मान्छेहरू अहिले आफैँ डेरा खोज्न थाल्नुभएको थापाले बताउनुभयो । मेलम्ची र इन्द्रावती खोलामा आएको बाढीको सबैभन्दा धेरै चपेटामा परेको मेलम्ची नगरपालिका–११ का स्थानीयवासी डेराको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ ।
कति दिन स्कुलमा बसेर गुजारा चलाउने भन्दै उहाँहरू डेरा खोज्न थाल्नुभएको वडाअध्यक्ष रुद्र दुलाल भन्नुहुन्छ । उहाँको वडामा पक्की र कच्ची अवस्थामा रहेका १५० घर पूर्ण रूपमा क्षति भएकाले अधिकांश डेराको खोजीमा लाग्नुभएको बताउनुभयो ।
‘‘अन्यत्रबाट आएर व्यवसाय गर्नेहरू आफ्नो ठाउँमा फर्कनुभएको छ, यहाँकै स्थानीयवासी भने डेरा खोज्न भौँतारिनुभएको छ,’’ दुलालले भन्नुभयो । मेलम्ची नगरपालिकाभित्र घरविहीन भएको र बाढीको उच्च जोखिममा रहेका एक हजारभन्दा धेरै मानिसलाई अहिले डेरा चाहिएको छ । मेलम्ची नगरपालिकाले क्षतिको प्रारम्भिक विवरण सङ्कलन गरे पनि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले घरखेत बगाएको विवरण छिट्टै सङ्कलन गर्ने तयारीमा लागेको छ ।
Previous: ….उस्को खुशिको लागि उसैलाई छोडिदिए मैले….
Next: नेपालमै पहिलो पटक दुरुस्तै लामखुट्टेको आवाज निकाकालेर टिकटकमा भाइरल बनेका १६ बर्षिय राजेश,सबैतिर चर्चा बटुल्दै(भिडियो सहित)